Usedom isixeko oasis - I-Airbnb
Usedom isixeko oasis
UBettina ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uBettina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Igumbi leendwendwe elinencasa libonelela ngendawo yokuya eholideyini etofotofo, esembindini wesixeko sase-Usedom kwindlu yedolophu eneendawo zokuhlala ezi-4. Indawo yokubhaka, ikhemesti, iibhanki kunye neevenkile ezinkulu zegrosari zikwindawo ekufutshane kwaye zinokufikelelwa ngokulula ngeenyawo. Igadi ezolileyo yangaphakathi ingasetyenziswa. Kukho i-terrace egqunyiweyo kwindawo yokuhlala. Indawo yokupaka iyafumaneka.
Ilinen yokulala kunye neetawuli zinikezelwa. Ikhitshi ixhotyiswe ngo: umatshini wekofu, iketile, ibhoyila yeqanda, itoaster, ioveni, umatshini wokuhlamba, ifriji-ifriji eyahlukileyo.
Iimpawu zomhlaba ze-Usedom yiMarienkirche kunye ne-Anklamer Tor. Zombini zilapha ecaleni kwenye. Ehlotyeni lika-2019, izibuko lase-Usedom liya kuphinda livuleke nge-flair yaselwandle. E-Anklamer Tor yiBlaumerie, eneneni ivenkile yeentyatyambo, kodwa kukho ikofu kunye neekeyiki ezigqwesileyo apho.
Sihlala kwindawo ekufutshane kwaye siyakuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo engaphezulu okanye kwimisebenzi edibeneyo. Kodwa kuphela ukuba ufuna. Ukuba ufuna ukuba noxolo lwengqondo, nawe uya kulufumana.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Usedom